I-CAN-SPAM izoguqula nini i-imeyili edlule? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Septemba 18, 2006 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
I-FTC ivale ogaxekile abambalwa muva nje. Ogaxekile kuseseyinkinga enkulu, ngithola amakhulu emiyalezo ngosuku. Bengikwazi ukuhlunga ama-imeyili (bengisebenzisa i-MailWasher) kepha ngiyeke. Kukhona ezinye izindlela - ukusebenzisa insizakalo ye-SPAM edinga ukuthi umuntu ngamunye agunyazwe ukungithumela i-imeyili, kepha ngiyathanda ukufinyeleleka.
Manje inkinga iyanda. Ngithola i-Comment and Trackback Spam kubhulogi lami. Nsuku zonke, ngingena ngemvume futhi kunemiyalezo emi-5 kuye kwayi-10 engabanjwa ngu-Akismet. Alikho iphutha labo - insizakalo yabo ibambe ngaphezulu kwama-4,000 amazwana ama-SPAM kubhulogi lami.
Ngabe i-FTC izobandakanyeka nini nezinye izinhlobo zogaxekile ngaphandle kwe-imeyili? Ngicabanga ukuthi ukuqhathanisa okukhulu yilokhu… Ngithenga isitolo emgwaqweni omkhulu onethrafikhi eningi. Lapho nje ngingena futhi isitolo sakwa-SPAM ezansi nomgwaqo singithola, bafuna ukuthola amanye amakhasimende ami. Ngakho-ke - banamathela izingqwembe eziwindini lesitolo sami bekhangisa isitolo sabo. Abangiceli imvume - bayayenza nje.
Kufana nomuntu olengise iphosta ngaphambili kwesitolo sami ekhangisa isitolo sakhe. Kungani lokho kungekho emthethweni?
Emhlabeni wangempela, ngizokwazi ukukuyeka lokhu. Ngingacela lowo muntu ukuthi ame, ngithole amaphoyisa ukuthi abacele ukuthi bame, noma ekugcineni ngikwazi ukummangalela noma ngivule icala. Kodwa-ke, kwi-Intanethi, angikwazi ukukwenza lokho. Ngiyalazi ikheli lika-SPAMMER… Ngiyasazi isizinda sakhe (Lapho ahlala khona). Kwenzeka kanjani ukuthi ngikwazi ukumvala? Kubonakala kimi ukuthi kufanele sinikezwe izinyathelo ezifanayo zobugebengu nezomphakathi esihlinzekwayo ukuba isitolo sami sangaphambili (ibhulogi) sibe ikheli langempela lomgwaqo.
Isikhathi sokunweba umthetho nokubeka ubuchwepheshe obungemuva kwale mithetho. Ngicabanga ukuthi i-SPAMMER IP kufanele ivinjelwe ngokuqhubekayo kusuka kumaseva wamagama emhlabeni wonke. Uma abantu bengakwazi ukufika kubo, bebezoyeka.
Tags: i-can-spamimeyiliumthethonqubo we-imeyiliftcumthethonqubo wogaxekile